यस रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8": प्राविधिक विशेषताहरु, र बेफाइदा
हरेक कार उत्साही त्यहाँ मात्र शास्त्रीय पिस्टन इन्जिन, तर पनि रोटरी छन् थाह छ। यो बाद को चरम rarity कारण हो। संसारमा मात्र निर्माता, एक रोटरी इन्जिन संग मानक कार को उत्पादन मा लगे - "माज्दा"। गरेको यो इन्जिन को प्रमुख सुविधाहरू नियालेर हेरौं।
13b msp - उदाहरणको रूपमा, सबै भन्दा लोकप्रिय रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8" ले।
मोटर 13b msp एक स्थापित र चिरपरिचित नाम Renesis, यस लेखमा विशेष गरिने छ। उहाँले "यस वर्षको इन्जिन" 2003 मा फिर्ता को शीर्षक प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुपर्छ। हामी धेरै टाढा को आविष्कार को इतिहास मा, मोटर को सञ्चालनको सिद्धान्त आविष्कार कि फेलिक्स Wankel र वाल्टर Freude 1954 मा भएको थियो भन्न बाहेक पहिलो विकास 30 का मा सुरु हुनत जानेछ।
1958 मा NSU कम्पनी एक रोटरी-पिस्टन इन्जिन (मा, • अन्य रैप) संग संसारको पहिलो कार जारी। तर पछि कम्पनी "माज्दा" धेरै वर्ष को लागि आफ्नो सुविधा उत्पादन गर्ने raps थियो। त्यसैले, अहिले केवल यो कम्पनी कार मा रोटरी-पिस्टन इन्जिन को प्रयोग मा एक ठूलो अनुभव छ।
छोटकरीमा, रैप र लाभ को सञ्चालनको सिद्धान्त
प्रशंसक मोटर क्लासिकल आन्तरिक दहन इन्जिन मा सिलेंडर र रोटर मूलतः एक पिस्टन छ समान छ जो एक स्टेटर, छ। को Eccentric सापट को क्रैन्कशाफ्ट रूपमा अभिनय। वास्तवमा, यस्तो संयन्त्र आन्तरिक दहन Chambers को अलग लागि प्रयोग गरिन्छ जो शिखर, रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो तापमान फरक मामलामा सबैभन्दा भारी लोड भागहरु मध्ये एक हो।
यस्तो मोटर लाभ को एक नम्बर छ। यस रोटरी इन्जिन "माज्दा को RX8", यस लेखमा गरिनेछ समीक्षा जो, अत्यन्तै संकुचित छ। यो एक पारंपरिक पिस्टन भन्दा धेरै कम विवरण छ। यो निस्सन्देह, यसको विश्वसनीयता बढ्ने छ। Recoil यस मामला धेरै उच्च छ मा पनि छ। 1.3 लिटर को मात्रा 250 अश्वशक्ति शक्ति ल्याउन पर्याप्त छ।
तपाईं शायद पहिले नै अंदाजा रूपमा, इन्जिन यस प्रकारको को व्यापक प्रसार प्राप्त भएको छैन। र त्यहाँ राम्रो कारण एक नम्बर हो। पहिले, कम इन्जिन जीवन। व्यवस्था गरेपछि केही लाभ नोड असफल कि यस्तो छ। निस्सन्देह, क्लासिक पिस्टन इन्जिन पनि आफ्नै पूरा, तर अर्को कथा हो।
यो पछिल्लो कसरी धेरै RPD शैली ड्राइभिङ मा निर्भर गर्दछ, तर प्रायजसो वरिपरि 100 000 मी मा रुक चलाउनुहोस्। मोटर भयो वा 200 000 मी गर्दा निस्सन्देह, त्यहाँ अवस्थामा थिए, तर यो बरु नियम, भन्दा एक मानक स्थिति एउटा अपवाद छ। आफै गरेर, RPD छलफल उपभोग्य, त्यसैले अक्सर यो सिर्फ एउटा नयाँ परिवर्तन।
एक शान्त सवारी लागि
यस रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8", जसको विनिर्देशों समीक्षा छलफल गर्दै छन्, अक्सर उच्च गति र स्थिर ड्राइव भावना लागि बेचिन्छ। हुनत उच्च गति मा काम र पिस्टन इन्जिन भन्दा कम हानि गर्छ, तर यो एकदम स्रोत कम गर्छ। सामान्यतया, एक चिन्ह 80 000 मी खस्दा र 50 000 मी सम्म केही अवस्थामा। अर्को एक प्रमुख ओवरहाल र विभाजन, वा नयाँ इन्जिन को स्थापना छ।
त्यहाँ एक महत्त्वपूर्ण caveat हो - RPD तात्दै सहनुहुन्न, यद्यपि तिनीहरूलाई खतरा। तिमी धेरै ध्यान वाहन मा ठंडा सिस्टम को उपयोगिता निगरानी गर्न आवश्यक छ किन कि छ। को जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु थर्मोस्टेट र अन्य उपभोग्य परिवर्तन गर्न समय। न्यूनतम बचत मा अधिकतम लागत सक्छन् भएकोले।
रोटरी इन्जिन "माज्दा को RX8" चरम अवस्थामा अक्सर काम भएकोले यसलाई ध्यान दिएर कायम हुनुपर्छ। विशेष, यो नियमित तेल परिवर्तनहरू लागू हुन्छ। यो प्रक्रिया प्रत्येक5000 मी गर्न उचित छ। इन्जिन भाग मा तेल को प्रतिस्थापन, यो समस्या हुन हुँदैन भन्ने विचार। पनि ओवरहाल मदत छैन किनभने तपाईँ नयाँ इन्जिन गर्न "" सक्छौं, यो सिफारिस गरिएको छैन कस।
प्रणाली सबैभन्दा लोड तत्व मध्ये एक - विख्यात अलिकति उच्च शिखर रूपमा। यो प्लेट दहन Chambers बीच एक छाप छ। त्यसैले, यो निरन्तर तापमान परिवर्तन र दबाव देखि तनाव अन्तर्गत छ। आंशिक डिजाइनर उच्च-मिश्र धातु इस्पात प्रयोग गरेर यसको गिरावट को समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित। यद्यपि, यो शिखर सामान्यतया पहिलो असफल।
खोज स्टेशन - एक विज्ञान
पनि आज, छैन हरेक कार धुने अप इन्जिन को मरम्मत हुनेछ। रूस, यी स्टेशन, र माथि मुख्य रूप जस्तै मास्को वा सेन्ट पीटर्सबर्ग रूपमा ठूलो शहर मा स्थित हो जो केही दर्जन भेला गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, प्रान्त मा यस्तो वाहन को मालिक के, अस्पष्ट छ। यो यस्तै मोटर संग कार खरीद मानिसहरूलाई रोक्न भनेर प्रमुख कारक को हो।
तर पनि विशेषज्ञहरु संग र त्यहाँ यस्तो सेवा भने, त्यसपछि जहाँ हामी स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गर्छन्? तिनीहरूले आदेश छ, र सम्भवत एक लामो समय प्रतीक्षा हुनेछ। निस्सन्देह, यो रोटरी इन्जिन "माज्दा को RX8", र त स्रोत कम छ, कारण आफूलाई अयोग्य कर्मचारी सेवामा कम हुन सक्छ। तसर्थ, कतै कार दिन पनि मनमोहक छैन। सायद, र रकम बस अचम्मको हुनेछ रैप को मरम्मत को लागि दावी, तर यो ताकत निर्भर विशेष minder लिएको छ।
इन्जिन सुधार Renesis
कम्पनी "माज्दा" RX7रिलिज पछि खातामा मोटर कमी केही लिएको र यसलाई सुधार गर्न प्रयास गरेको छ। disclosed थिएन भन्दा जो manipulations, एक श्रृंखला पछि, विकासकर्ता शैली ड्राइभिङ आधारमा इन्जिन 300 000 450 गर्न 000 किलोमिटर चलाउन हुनेछ, बताए। तथापि, उहाँले यो अवधिमा पनि 3-4 ओवरहाल छ कि थप्न बिर्सन्छन्। त्यस्तो आज स्थिति हो।
लाभ छ कि मात्र महत्वपूर्ण उन्नयन दुई तेल नलिका को स्थापना छ। हुनत त्यहाँ कमियां बिना गरिएको छैन। आफ्नो डिजाइन को apexes पर्याप्त lubricated र धेरै छिटो sintered त, धेरै सफल भएको थियो। यो नकारात्मक restyling मा निर्मूल थियो। तर अब यो इन्जिन सञ्चालनको सुविधाहरूको बारेमा कुरा गर्न उपयोगी छ।
के इन्जिन को डर छ?
हामी पहिले देखि नै रोचक रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8" के एक सानो तपाईंसँग, बिट बाहिर समझ गर्नुभएको छ। सञ्चालन, लाभ र बेफाइदा पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। र अब अन्य महत्वपूर्ण विवरण। RPD को धेरै भयभीत छ:
उच्च गति मा लामो ड्राइभ।
पहिलो दुई अंक सम्बन्ध, यो सबै धेरै स्पष्ट छ। खराब पेट्रोल साँच्चै रैप को प्रदर्शन असर गर्छ। Detonations र अस्थिर सञ्चालन। यसलाई त्यसैले कडा मात्र ग्यास स्टेशन मा पाउन सकिन्छ कि सबै भन्दा राम्रो इन्धन भर्न सिफारिस गरिएको छ। उच्च गति लागि जाँदा, तिनीहरूले तात्दै कारण। कार्बन जम्मा र स्पार्क झटका हटाउन ग्याँस दिन यो कहिलेकाहीं आवश्यक छ तापनि, तर यो छोटो हुनुपर्छ।
मर्मतसम्भार लागत बारे
र यो सायद सबैभन्दा रोचक छ। कार को अपेक्षाकृत कम लागत तापनि यसलाई विशेष जसरी लगानी गर्न पाउनेछन्। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण - इन्धन खपत। यहाँ यो एकदम प्रभावशाली छ। बारेमा 10-12 लिटर र 20 मा 13 देखि शहर मा राजमार्ग तर यसलाई सबै प्रणाली र घटक को सही सञ्चालनको मामला छ। त्यहाँ कम्तिमा एक खराब अक्सिजन सेन्सर छ भने, दर औसत र 20 लिटर र माथि वृद्धि छ प्रवाह।
पनि फिड एक 95 मिटर हुनेछ त कार, 92 octane उपभोग गर्न एकदमै हिचकिचाए छ भन्ने तथ्यलाई विचार गर्नुहोस्। फलस्वरूप, लागत केहि वृद्धि। तर सबै छ। तेल कार पनि स्वेच्छाले खान्छ। खपत गर्ने त्वरक कसरी दबाब आधारमा प्रति 1 000 मी, 500-1000 एमएल क्रम छ। मूल लीटर बोतल 1000 rubles लागत। तर तपाईं प्रति लीटर 500 rubles को लागि एक गुणवत्ता प्रतिस्थापन फेला पार्न सक्नुहुन्छ। एक "workhorse" अत्यन्तै कठिन समावेश गर्दछ। कार उपयुक्त बरु गर्न र काम बाट दैनिक ट्राफिक जाम धक्का भन्दा, औपचारिक भ्रमणमा लागि बरु छ।
यस रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8": मालिक र विशेषज्ञहरु को राय
सबैभन्दा विशेषज्ञहरूका अनुसार यस मोटर को एक विशाल फाइदा छ। यसलाई आफ्नो कम वजन छ। एउटै "Renesis" अलिकति एक सय किलो भन्दा बढी एउटा ठूलो छ। तपाईं नै क्षमता इन्जिन लिन भने, यो सबै 250-300 किलो। सामान्य मा, RX8 लागि यस्तो शक्ति एकाइ एकदम वाहन ब्यालेन्स सुधार र वजन कम गर्न दिनुभयो।
अर्को प्रमुख फाइदा, धेरै अनुसार - उच्च दक्षता र जस्तै कंपन को अभाव। मोटर छैन पनि हल्ला छ रूपमा यो, उच्च गति मा थप सहज सवारी बनाउँछ, र एकदम सुखद ध्वनि छ। तर विशेषज्ञहरु धेरै स्टेशन, यो धेरै capricious मोटर र अनिवार्य अप्रत्याशित छ भन्छन्। उहाँले रूपमा राखिएको निर्माता जीवन र समय कम मा धेरै हिंड्न सक्छौं। यसलाई भविष्यमा कुनै पनि भरोसा दिन छैन।
अर्को shortcoming - कम तापमान मा कम सेवा जीवन। यो, को पाठ्यक्रम पनि पारंपरिक पिस्टन-सिलेंडर इन्जिन लागू हुन्छ, तर RPD यहाँ सफल भयो। कम्पनी "माज्दा" एक विशेष चिसो सुरु "उप-शून्य सुरुवात" को लागि विकास गरिएको छ, भाग मा यो समस्या समाधान गर्न मदत जो सिस्टम छ।
त्यहाँ एक मिलाउने Renesis छ
धेरै कार मालिक धेरै रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8" परिमार्जन गर्न चाहनुहुन्छ। प्रतिक्रियाहरू पनि अनुपयुक्त मिलाउने संकेत गर्छ। यो मुख्यतया यसको उच्च लागत र जटिलता कारण हो। पनि पहिले नै एकदम कम छ, जो, र यो असम्भाव्य जो कोहीले चाहनुहुन्छ छ थप कम स्रोत RPD, असर गर्छ।
त्यो किन कार झन् बरु धुन भन्दा अर्को मोटर स्थापना गर्न प्रयास गरिरहेको छ। तथापि, प्रायजसो, यी प्रयासहरू केही नेतृत्व गर्न आए। रैप यस मामला 110 किलो एउटा सानो ठूलो, छ। मात्र embodiment थप वा कम समझदार - रैप RX-7, थप टिकाउ मानिन्छ जो सेट। मालिकहरूको 90% कारखाना त्यस सेट सवारी हुनत, कि स्टक छ, र धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ।
धेरै "को RX8 माज्दा" एक रोटरी इन्जिन हो भन्नुभयो गरिएको छ। तपाईं यस लेखमा हेर्नुहोस् र क्लासिक पिस्टन इन्जिन आफ्नो प्रमुख मतभेद देख्न सक्नुहुन्छ फोटो raps। माथिको देखि यो इन्जिन अत्यन्तै fussy छ कि अन्तमा गर्न सकिन्छ। कम तापमान सहन गर्दैन, नियमित हेरविचार र मर्मतका आवश्यक छ। पनि धेरै "लोभी", यो तेल र पेट्रोल दुवै बुझाउँछ।
तर त्यो छ र तिनीहरूको बलियो पक्ष। यसलाई उत्कृष्ट गतिशीलता, एउटा सानो मात्रा, राम्रो ध्वनि र अविश्वसनीय भावना बाट अश्वशक्ति को एक ठूलो रकम दिन्छ। यो इन्जिन आफ्नो पैसा लिन जसले कार को उपयुक्त बरु प्रबल प्रशंसक, भन्दा मान्छे छ।
लागत साँच्चै ठूलो हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं RPD एक हट, सङ्कुचन मा सुरु वा तल 6.5 एटीएम गिर गर्न गाह्रो छ याद भने, यो इन्जिन को प्रारम्भिक निधन नेतृत्व संभावना छ। यस मामला मा ओवरहाल यसलाई ढिलाइ गर्न राम्रो छ। सामान्य मा, रोटरी इन्जिन "माज्दा को RX8", सिद्धान्त जो यस लेखमा, धेरै underfulfilled समीक्षा भएको थियो। यो रैप को मात्र होइन मोडेल, तर सामान्य मा यस प्रकारका सबै इन्जिन सम्बन्धित छ।
यो Renesis को मूल्य बारेमा कुरा गर्न शायद आवश्यक छ। यो एक सस्तो खुशी छैन। स्टेशन यो काम गर्न थप - र 100 000-130 000 हजार। केही लागि, यो रकम छैन त ठूलो र नयाँ इन्जिन लागि हो, तर पनि खाता र वाहन खर्च मा लिनुपर्छ। पेट्रोल, ठूलो परिमाणमा तेल, र यति मा। एन जब सबै राम्रो जान्छ, राशि 300 000 र थप वृद्धि हुनेछ। कि पछि, यो विचार लायक छ, तर यो राम्रो रोटरी इन्जिन "माज्दा RX8" छ। यसको कम्तिमा प्रभावशाली को विशेषताहरु, तर बेफाइदा धेरै।
Preheater डिजेल इन्जिन: आफ्नै हात को स्थापना
"मर्सिडीज Gelendvagen": मालिकको समीक्षा
इन्जिन 406 - विवरण
बजार अवलोकन र विशेषज्ञ समीक्षा: एक स्लाइडर फोन कसरी चयन गर्न
संसारमा सबैभन्दा लामो नङहरु: नयाँ गिनीज रेकर्ड
कसरी "बेबी बोन" हेरचाह गर्न? समीक्षा - "बेबी बोन" पुतली
के फेरि सुरु गर्न एक व्यक्ति को गुणहरू आवश्यक हो?
रगत रक्सी सामग्री
को "आंधी" Ostrovsky को इतिहास। उत्पादन को विश्लेषण "वर्षा"